भविष्य बेरोजगार होइन र कहिल्यै भएको छैन Martech Zone
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, र अटोमेसनको भविष्यको बारेमा व्याकुलता वास्तवमै रोक्न आवश्यक छ। इतिहासको प्रत्येक औद्योगिक र प्राविधिक क्रान्तिले मानिसहरु लाई आफ्नो प्रतिभा र रचनात्मकता लागू गर्न असीमित अवसरहरु को लागी खोल्यो। यो होइन कि निश्चित रोजगारहरू हराउँदछन् - अवश्य पनि तिनीहरू गर्छन्। तर ती रोजगारहरू नयाँ जागिरले बदलिन्छ।
जब म आज मेरो कार्यालय वरिपरि हेर्छु र हाम्रो कामको समीक्षा गर्दछु, यो सबै नयाँ छ! म हेर्दछु र हाम्रो एप्पलटीभीमा प्रस्तुत गर्दछु, हामी हाम्रो अमेजन इकोमा संगीत सुन्छौं, हामीले ग्राहकहरूको लागि धेरै मोबाइल अनुप्रयोगहरू विकास गरेका छौं, ग्राहकहरूका लागि इन्फोग्राफिक प्रोग्रामहरू छन्, यस हप्ता हामीले दुई प्रमुख ग्राहकहरूलाई जटिल कार्बनिक खोज मुद्दाहरूको साथ मद्दत गरें, म छु। यो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रकाशित गर्दैछौं, र हामी सामाजिक मिडिया मार्फत लेखहरूलाई प्रमोट गर्दैछौं।
तथ्य यो हो कि, मैले १ years बर्ष अघि पनि सपनामा सोचेको छैन कि म मेरो आफ्नै डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी छ र ग्राहकलाई मार्केटि online अनलाइन अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दैछु। भविष्यको लागि बाटो पातलो र पातलो हुँदै गइरहेको छ, यसले फराकिलो र फराकिलो खुलिरहेको छ! प्रत्येक चरणको अटोमेसनले विकास र नवीनताका लागि नयाँ चरण सक्षम गर्दछ। जब हामी हाम्रा ग्राहकहरुका लागि एक धेरै विचार र रचनात्मक कार्य गर्दछौं, हाम्रो दिनको धेरै जसो डाटा सार्न, प्रणाली स्थापना गर्न, र कार्यान्वयन गर्नमा व्यतीत हुन्छ। यदि हामी ती तत्वहरूलाई न्यून गर्न सक्षम छौं, हामी यति धेरै सिर्जना गर्न सक्दछौं।
म विश्वास गर्दछु कि हाम्रो चुनौती हो, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा, यो हो कि हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिँदैछौं र विलुप्त हुँदै गइरहेका रोजगारका लागि तयार गर्दैछौं। यी नयाँ प्रविधिहरूमा भुमिमा हिट गर्न हामी आउँदो पुस्तालाई तयारी गर्न हामीलाई पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणाली चाहिन्छ।
गत महिनाको लागि, उदाहरणको रूपमा, म मेरी छोरीलाई उनको एचटीएमएल होमवर्कको साथ मद्दत गर्दैछु। म उनको CSS, जाभास्क्रिप्ट, र HTML सिकाउँदै छु। तर, एक PR पेशेवर को रूप मा, यी प्रतिभा बेकार छन्। उनीहरूलाई बुझ्नु एक चीज हो, तर मेरी छोरीले उनको क्यारियरमा कोड को एक लाइन लेख्ने संभावना कम छ। उनी सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली को उपयोग गरी रहनेछ। म चाहान्छु कि उसका पाठहरू टेक्नोलोजी र समझको एक सिंहावलोकन थियो कि कसरी मार्केटिंग प्लेटफर्महरू एक अर्कासँग एकीकृत हुन्छन् ताकि उनीले बुझी क्षमताओं ती प्रणालीहरूको ... तिनीहरूलाई कसरी निर्माण गर्ने होइन।
औपनिवेशिक जीवनले यो इन्फोग्राफिक विकास गर्‍यो, १ Jobs रोजगारहरू जुन Years० बर्ष भन्दा अघिको थिएन। जब तपाई कार्यको सूची र औसत तलब समीक्षा गर्नुहुन्छ, डिजिटल मिडियामा कति छन् नोट गर्नुहोस्!
टैग: अनुप्रयोग विकासकर्ताब्लगरमुख्य सुन्ने अधिकारीऔपनिवेशिक जीवनड्रोन अपरेटरभविष्यमाइंफोग्राफ़कसूचना सुरक्षा विश्लेषकजबएसईओ विशेषज्ञसामाजिक मिडिया प्रबन्धकप्रयोगकर्ता अनुभव डिजाइनरआभासी सहायकवेब विश्लेषक